Paramende yeEU Inoti Mangoda eZimbabwe Amire Kutengeswa Pari Zvino
Chikunguru 08, 2010
Dare reparamende renyika dziri muEuropean Union rabuda nechisungo chekuti mangoda ekwaMarange haafanirwe kutengeswa kudzamara Zimbabwe yawana mvumo kubva kuKimbelry Process.
Nhengo yedare iri, VaGeoffrey Van Orden, vaudza Studio 7 kuti dare ravo rawirirana panyaya yekuti mauto ari kwaChidzwa anofanirwa kubviswa uye mutungamiri weCentre for Research and Development, VaFarai Maguwu, vanofanirwa kuburitswa muhusungwa mavari.
VaMaguwu vakasungwa mwedzi wapera vachipomerwa mhosva yekuburitsa mashoko anonzi nehurumende anoisvibisa. European Union yatiwo vanhu vemuZimbabwe vari kushupika, nokudaro Zimbabwe inofanirwa kugadzirisa zviri kunetsa kwaMarange, kuitira kuti mangoda aya atengeswe pasi rose.
VaMoses Mare inhengo yekomiti yeparamende inoona nezvezvicherwa. VaMare vanoti vanotenderana nevari kuti mangoda asatengeswe kusvika zvinhu zvagadziriswa munzvimbo iyi.
Mutungamiri wenyika, VaRobert Mugabe, nemamwe makurukota eZanu-PF, vaimbenge vati kana Kimberly Process yaramba kuvapa mvumo yekutengesa mangoda, Zimbabwe ichatengesa yoga mangoda ayo, vobuda muKimberly Process. Kimberly Process ndiyo inopa nyika marezinesi ekutengesa mangoda pasi rose.
Asi kutaura kwaVaMugabe kunenge kungokuma chete, nekuti zvinonetsa kuti Zimbabwe iite zano ndega, sezvo nyika dzinotenga mangoda, dziri nhengo dzeKimberly Process.
Gurukota rezvemari, VaTendai Biti, vanoti Zimbabwe inofanira kupihwa mukana wekutengesa mangoda ichigadzirisa nyaya dziri kunzi neKP dzigadziriswe dzakafanana nedzekutyorwa kwekodzero dzevanhu.
Politiburo yeZanu-PF yakasangana neChitatu ikatiwo mangoda anofanira kubvumidzwa kutengeswa. VaDewa Mavhinga igweta rinorwira kodzero dzevanhu, uye vachishanda neCrisis in Zimbabwe Coalition. VaDewa Mavhinga vanoti mangoda ngaamire kutengeswa.
Asi nhengo yeZanu PF, VaChindori Chininga, avo vanova sachigaro wekomiti yeparamende inoona nezvezviwanikwa vanoti mangoda anofanira kuti atengeswe.
Hurukuro naVaMoses Mare
Hurukuro naVaChindori Chininga naVaDewa Mavhinga